Noma yimuphi umkhiqizi wembewu unikezela abathengi bayo izinhlobo ezahlukene zezitshalo ngezikhathi ezahlukene zokuvuthwa, izithelo zokusetshenziswa kwifomu elisha noma elisawoti. Futhi, yiqiniso, phakathi kwazo zonke izinhlobo ungakwazi njalo ukuthatha izithelo ezinkulu noma eziphakathi. Izinhlobonhlobo ze-"Liang" ziye zanqoba uthando lwabalimi ngenxa yezakhiwo zabo zokunambitheka nezisebenzisekayo.
Utamatisi "Liang" - incazelo
Lokhu okuhlukahluka kungokwezihlobo ezihlukahlukene zokushisa. Ungakhula kokubili ezimweni zomhlaba ezivulekile nasezikhungweni zokugcina izithombo. Abanye balimi balondoloza ukukhula ezimweni zegumbi. Kukhona uhlobo oluthile lwezotamatisi elithi "Liang" pink. Umehluko kuphela embala wesithelo, izici ezisele zigcinwe.
Utamatisi "Liang" ibhekisela ekuvuseleleni, zonke izithelo zivuthwe kakhulu ngokuvumelana. Ukuphakama kwesihlahla akudluli ku-40 cm. Izinhlobonhlobo zidinga pasynkovaniya ngokusebenzisa ama-1-2 amashidi, kanti i-inflorescence yokuqala isakhiwe kusuka kushidi lesithupha. Izithelo ze-tomato "i-Liang" pink kanye ne "Liang" zinomumo ozungezayo, i-peel inamandla kakhulu futhi ayifuni njengoba ivuthwa.
Izinhlobonhlobo zamatamatisi "Liang" zihlukaniswa nokuqukethwe okuphezulu kwamasetheni okugaya amaminerali, amavithamini weqembu B1 ne-B2, kanye nama-acids e-organic ne-folic acid. Ngezithelo ezivuthiwe okuqukethwe okuphezulu kwe-carotene. Yingakho kunconywa ukuvuna utamatisi "Liang" ngokushesha emva kokuvuthwa kwabo, lapho zonke izakhi eziwusizo zifinyeleleka kakhulu.
Utamatisi ezihlukahlukene "Liang" - izici ezikhethekile zokulima
Utamatisi "Liang" pink (noma kunjalo, kanye nje "Liana") uvame ukukhula nge seedling indlela. Qalisa Kunconywa ekuqaleni kukaMashi, bese kuthi ngesikhathi sokufudumala okuphezulu kwenhlabathi izithombo zizoqina. Ukuze wenze lokhu, sebenzisa izimbiza ngobukhulu buka-10x10 cm bese uthela inhlanganisela yenhlabathi yomsoco lapho. Ezinyangeni ezingababili uzothola izithombo ezilungele.
Endaweni yayo enomphela, izithombo ze-tomato "Liang" kufanele zitshalwe ekuqaleni kukaMeyi (izinsuku ezinhle kakhulu kusukela ku-10 ukuya ku-20). Uma ufuna ukuqala ukufika kuqale ekuqaleni kwenyanga, qiniseka ukuthi umboza imibhede ngefilimu. Isikimu sokuhlala sijwayelekile ngo-7x7 cm.
Ukuqinisekisa ukuthi zonke izimfanelo zezici ze-tomato "Liang" zizibonakalise ngokugcwele, kutuswa ukuba utshale izithombo noma imbewu ezindaweni lapho ngaphambi kokuba izitshalo noma izitshalo zihlume. Uma wakhula ama-aubergini, amazambane noma i-pepper kusayithi, le ndawo yokutshala utamatisi ngeke isebenze. Phakathi nenkathi ekhulayo, izikhathi ezimbili kuya kathathu sondla umanyolo obunzima, sihlala sikhulula inhlabathi futhi siwahambisa ngamanzi afudumele. Ukuvuna okuvuthiwe nokuchichima ngaphansi kwezimo ezinjalo kuqinisekisiwe.
Indlela yokumboza i-hydrangea ebusika?
Ukutshala ama-Tulips ku-Spring
Ama-aphid on pepper - kanjani ukukhipha?
Izimbali ezingapheli zikhula zonke isikhathi sehlobo
Ubuningi bamanzi - izici zobuchwepheshe obusha emanzini asekhaya
Ngonyaka onjani i-apricot iveza izithelo?
Izindlela zokulwa nezikole
Hydroponics for anyanisi ngezandla zabo siqu
Indlela yokukhulisa i-melon?
Kungani izithelo zingatheli izithelo?
Ukwakhiwa kwegumbi labantwana bezocansi ezahlukene
Ubuhlungu obuhlangene be-plaster e-Chinese
I-Dautzen Crez - biography
I-patties nge izaqathe
Ama-peas aluhlaza ebusika - izindlela zokupheka ezenziwe ekhaya
Value Daily of Vitamin C
U-Ashton Kutcher uhlasele uDonald Trump ngenqubomgomo yakhe yokuthutha abantu
Isihlalo sezingubo zesihlalo esinama-armrests
Izindwangu Zomdlalo Zasebusika
Nina Richie "I-Red Apple"
I-Fashionable nail polish 2014
Indlu yezinyosi enezandla
U-Anna Khilkevich - umagazini we-Maxim